Waxgaradka Galbeedka Burco Oo Daadifeeyay Hadal Ka Soo Yeedhay Odayaal | Somaliland.Org
December 28, 2012	Burco (Somaliland.Org)- Waxgarad iyo odayaal ka soo jeeda deegaanka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si kulul u beeniyay, kuna tilmaamay mid aan sal iyo raad toona lahayn, hadal dhawaan ka soo yeedhay odayaal ka soo jeeda deegaankooda, sidoo kale waxa ay sheegeen in cid aan iyaga ahayni ka guurti ahaan aanay ku hadli karin afka beesha galbeedka Burco.
Xubnahan oo ka mid ah odayaasha fulinta guddida beesha oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalad Burco waxa ay si cad uga hor yimaadee hadal dhawaan ka soo yeedhay odayaal ka soo jeeda deegaanka ay u yihiin guurtida, kuwaas oo ku hadlayay afkooda. Waxaanay tilmaameen in ay raaligalin ka bixinayaan hadalka ka soo yeedhay rag ay sheegeen inay afkooda ku hadleen, balse aanay ragaasi ka mid ahayn guurtida beesha iyo isla markaana aaanay ahayn kuwo metela bulshada deegaankooda.
Waxgaradka iyo odayaashu waxa ay tilmaameen in ay si gaar ah ay uga raaligalinayaan xukuumada Somaliland, hadalkii ka soo yeedhay ragaasi oo ay sheegeen in ay ku gafeen xukuumadda. Xoghayaha guddida beesha galbeedka Burco Rashiid Axmed Ladiif ayaa ugu horayn halkaasi ka hadlay, waxaanu yidhi “Waxaan leeyahay beelaha Somaliand wax dhibaato oo u dhaxeeya ma jiro, waxaan leeyahay nabadgalyada ha la ilaaliyo, hadaan nabada la ilaalin waxba ma jirayaan, markaa dawladu nabada ha ilaaliso, dhalinyaraduna ha la qabteen oo ha la ilaaliyaan”.
Maxamed Cune Faarax Dayr oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu yidhi yidhi “Waxaanu u sheegaynaa hay’ada amniga iyo wasiirka arrimaha gudaba, cidii aan ahayn guurtida guud iyo salaadiinta iyo cuqaasha beesha, ee ku hadasha afka beesha in ay yihiin dambiile yaal. Waxaaan fariin u diraynaa cid kasta oo arritani khusayso in aanay guurti ahaan aanay ku hadli karin magaca afka beesha ee ay beeshu tahay guurtideeda cida ku hadli karta raga halkan fadhiya ee soo jireenka ah.”
Hadalkan waxgaradka iyo odayaashu waxa uu ka dambeeyay ka dib markii odayaal iyo shakhsiyad kaas oo jeeda deegaankoodu ay ka hadleen magaalada Ceerigaabo, isla markaana dhaliil u soo jeediyeen xukuumada iyagoo ku hadlaya afka guurtida beesha galbeedka Burco.
Sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Cabdi Xooje iyo Cismaan Warsame oo labaduba ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha galbeedka Burco, waxaanay sheegeen in ay ka xunyihiin kana soo hor jeedaan wax kasta oo lagu kala qaybinayo beelaha walaalaha ah ee gobolka Togdheer.
Previous PostJaamacadda Burco oo Xaflad Soo dhaweyn ah u samaysay Golaha Deegaanka ee cusubNext PostMadaxweyne Somaliland Oo Caawa Kulan la Yeeshay sadexda Xisbi Qaran ee Soo Baxay	Blog